Yese Dhizaini YeMafambiro Ekushandisa - Inobatsira Tekinoroji
Pfungwa yekugadzirwa kwepasirese ndeye pfungwa yekuti dhizaini dhizaini inogadzirwa kufambidzana kumazera ese uye kugona. Izvi zvinosanganisira vanhu vakuru uye vakaremara. Kana iwe uri kubvunza kana izvo zvatove zviripo, hazviiti. Iwe uri kufunga nezve iro izwi "vakaremara kufambidzana". Pane musiyano mukuru pakati pezviviri.
vakaremara kufambidzana nzvimbo dzakagadzirirwa kuchinjika kune hwakatogadzirwa hwaro kuitira kuti zvive nyore kuwana.
vakaremara kufambidzana Yese Dhizaini
Kunyangwe izvi zvichinzwika sepfungwa yakanaka, kazhinji kazhinji kwete, vakaremara kufambidzana hwaro hunowanikwa nevakawanda kunge husingafadzi uye husingawanzo kupa hushoma fomu ye kufamba. Pfungwa yekugadzirwa kwepasirese ipfungwa yekuvaka nzvimbo kubva pasi kusvika pakuve kufambidzana kune chero ani zvake anogona.
Door Levers uye Flat Kupinda
Mimwe mienzaniso yekugadzirwa kwepasirese munzvimbo dzenzvimbo dzinosanganisira levers yemusuwo uye yakapinda yekupinda. Masuo akavhurwa nemazambara panzvimbo yemapanga anobatsira vanhu vazhinji vane matambudziko ekubata kana kushaya simba kwemhasuru.
It zvakare inobatsira zvakanyanya kune vanhu vakatakura zvinhu zvakakura. Levers zvakare anotaridzika zvakanyanya kunakidza kupfuura zvinoita mapfundo.
Zvekugadzira Zvese Zve kufamba Kukanganisa
Flat uye yakafara nzira dzekupinda ndeimwe nzira yatinogona kuwedzera kufamba munzira dzedu. Kugadzira aya mapindiro kwaizobvumidza vanhu vane kufamba kukanganiswa kwekuwana nzvimbo dzisina ramp. Vana vari mungoro, vamwe vanhu mukati mavhiripu, Uye chinja yezvinhu zvakakura zvese zvaizove zvisinganetsi kana shanduko iyi ikaitwa.
Yakaderera Mutengo Zvese Dhizaini
Rocker mwenje switch ndeimwe sarudzo hombe yemutengo wakaderera uye yakareruka rework yenheyo yedu yazvino. Idzi switch dzinobvumidza kuwana kune vanhu vane mota zvinonetsa uye mushandisi neanosvika maturusi.
Pfungwa huru yekushambadzira kwepasirese ndeyekuti pamutengo wakaderera, tinogona kuwedzera kuwanikwa kwemamirioni avanhu.
Mitero Yemutero yeZvese Dhizaini Pfungwa
Munzvimbo zhinji, hurumende iri kusvika pakupa mutero zvinokurudzirwa neshanduko dzakagadzirwa kugadzirwa kwepasirese. Iri idanho rakakura sezvo richikurudzira rusununguko uye kufamba kune vese. Sezvo zvimwe zvivakwa kutenderera pasirese zvinoenderana nemaonero aya, ingori nyaya yenguva dhizaini yepasirese isati yagadzwa seyakajairwa dhizaini yekugadzira.